ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: January 2010
January 30, 2010 at 6:02 am (လူမှုရေးဆောင်းပါးများ)
မဟာမြိုင်တောရဆရာတော် ဦးဇောတိက ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်တစ်ပုဒ်တွင် လူနှင့်တိရစ္ဆာန် တို့၏ အဓိကခြားနားချက်တစ်ခု ပါဝင်သည်ကို သတိထား၍ နာကြားဖူးခဲ့သည်။ စာသားအတိအကျတင်ပြနိုင် လောက်အောင် မမှတ်မိတော့သော်လည်း၊ ဆိုလိုရင်းမှာ လူသည်သင်ကြားပေးရန် လိုသောသတ္တဝါဖြစ်သည် ဟူသောအချက်ကို ဆရာတော်ကဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
မွေးစ တိရစ္ဆာန်ငယ်တစ်ကောင်သည် မိခင်၏ယုယဖေးမမှု မရသော်လည်း ထိုတိရစ္ဆာန်၏ မွေးရာပါ အရည် အချင်းကြောင့် သူ၏အသက်ရှင်သန် ဖြစ်ထွန်းမှုအတွက် သူကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ခွေးမကြီး တစ်ကောင်က မွေးဖွါးလိုက်သော ခွေးငယ်လေးများသည် မွေးပြီးပြီးချင်း၊ နို့စို့ရကောင်းမှန်း သိကြ သည်။ သိရုံမျှမက မိခင်နို့ကိုရအောင် ရှာဖွေတတ်ကြသည်။ မထွေးပွေ့ရပဲလျက် နို့စို့တတ်ကြသည်။ လူကား ထိုကဲ့သို့မဟုတ်။ မွေးရာပါ အရည်အချင်းမရှိ။ သိတတ်သူမှ မသိတတ်သူကို ပြုစုစောင့်ရှောက် သင်ကြားပေး ရသည်။ မိခင်ဝမ်းမှ ကျွတ်စကလေးငယ်သည် နို့စို့ချင်သည်တော့မှန်သည်။ သို့သော် မွေးရာပါ အရည်အချင်း မရှိသောကြောင့် မိခင်ရှိရာဘက် လှမ်း၍မသွားနိုင်။ မိခင်က ပွေ့ယူချီမပေးရသည်။ သို့သော် ထိုမွေးရာပါ အရည်အချင်းရှိသော တိရစ္ဆာန်အား သင်ကြားပေးသော် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာ ရသည်။ အဆုံးမရှိ မတတ်မြောက်နိုင်။ မွေးရာပါ အရည်အချင်းမရှိသော လူသားကား သင်ကြားပေးခဲ့သော်၊ အဆုံးမရှိ တတ်သိ နားလည်သွားကြ၏ဟု ဆရာတော်ကဟောကြားပါသည်။ထိုကြောင့် လူကိုသင်ကြားပေးရန် လိုသည်ဟုဆို၏။
ကျွန်တော်၏အသက်အရွယ်အရ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု အတွေ့ အကြုံ အရ ဆရာတော်၏ဟောတရားသည် အလွန်မှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
ကျွန်တော်၏ဘဝ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဝမ်းစာရှာဖွေမှုကို ‘သင်္ဘောသား’ အလုပ်ဖြင့် ရှာဖွေခဲ့ရဖူးသည်။ အထက် ပိုင်းအရာရှိများအဖြစ် ဂျပန်လူမျိုးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော သင်္ဘောကုမ္ပဏီတွင် လုပ်သက် စုစုပေါင်း ၂၈ လတိုင်တိုင် လုပ် ကိုင်ခဲ့ဖူးသည်။
သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းကပ် ကုန်ချရန်ဆိုလျှင် ၂၄ နာရီမှ ၃၆ နာရီအတွင်းကြာတတ်သည်။ကုန်တင်ရမည် ဆိုလျှင် တော့ ဆယ့်လေးငါးနာရီဖြင့် ပြီးသွားတတ်သည်။ သူ့သင်္ဘောအင်ဂျင်ကို သူ့စိတ်တိုင်းကျမကိုင်ရလျှင် သူမပျော်ရွှင်တော့။ ကျောက်ချထားချိန် ဆိပ်ကမ်းကပ်ချိန် လောက်သာ အင်ဂျင်ကလည်း ပြုပြင်မွမ်းမံ၍ ရသည်။ ခရီးသွားနေစဉ် ခေတ္တနား၍ပြုပြင်မွမ်းမံရန် အခွင့်ရနိုင်သောအရာ မဟုတ်။ မိမိ၏တာဝန်ကို အကောင်းဆုံး ထမ်းဆောင်ခွင့်ရမှ ကြေနပ်တတ်သည့် သူ၏စိတ်ဓါတ်သည် မည်ကဲ့သို့ ရရှိလာ ပါသနည်း။
ကျွန်တော် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မကြာခဏရောက်ဖူးသည်။ ဆိပ်ကမ်းကပ်ပြီးနောက် အလုပ်ပြီးလျှင် ဆိပ်ကမ်းဆင်း (Go shore ဟုပြောလေ့ရှိသည်) ဈေးဝယ်၊ လည်ပတ် ဗဟုသုတရှာဖြစ်သည်။ အရပ်တကာသွားရင်း ကလေးများကျောင်းတက်ကျောင်းဆင်း သွားကြသည်ကိုလည်း တွေ့ဖူးသည်။ ကလေးများကို မိဘများက ကျောင်းလိုက်ပို့သည်ကို မတွေ့ဖူးခဲ့ပါ။ကလေးများ အုပ်စုလိုက် ကားလမ်း များ ဖြတ် ကူးသွားကြသည်။ လမ်းအချက်ပြမီးများကြည့်၍ သူတို့အားကိုးနှင့် သူတို့ဖြတ်သန်းကြသည်။ ကားမောင်းသူများကလည်း ကလေးများ ဖြတ်သန်းနေလျှင် စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ဆိုင်းပေးကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်ယုံကြည်မှုမွေးကြဟု သင်ကြားပေးနေသကဲ့သို့ ခံစားရသည်။ အထူးခြားဆုံးကား ဂျပန်စာအုပ်ဆိုင်များဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားကလေးများ ဝင်ရောက်လာပြီး၊ သူတို့ နှစ် သက် ရာ စာအုပ်များ ကိုယူ၍ ဆိုင်တွင်းတစ်နေရာရာထိုင်၍ ဖတ်နေသည်ကို စိတ်ရှည်စွာ ခွင့်ပြုထားကြသည်။ ကလေးများ အခမဲ့ ဖတ်ချင်သလောက် ဖတ်ခွင့်ပြုသည်။ ကလေးများကလည်း စာအုပ်ဆိုင်ထဲရောက်လျှင် မျက်နှာနှင့် စာအုပ်အပ်ပြီး သည်နှင့် စာအုပ်ထဲသာ စိတ်ရှိနေတတ်ကြသည်။ နောက်ပြောင်ဆော့ကစား စကားများ တာတွေ မတွေ့ရ။ လူဆိုတာ စာ များများဖတ်ခြင်းဖြင့် ဗဟုသုတကိုရှာဖွေရမည်ဟု သင်ကြားပေးနေသကဲ့သို့ မြင်ခဲ့ရသည်။
မြင်ကွင်းကား ရိုးရိုးလေးဖြစ်သည်။ ဂျပန်မိခင်တစ်ယောက် ဈေးဝယ်ထွက်လာခြင်းသာ၊ သူ၏ကလေး (လေးငါး လသားလောက်ရှိမည်ထင်သည်)ကို ကြောတွင်သိုင်းထား၍ ဈေးဝယ်နေခြင်းမျှသာ၊ ကလေး အမေက ဝယ်ယူပြီး၊ ပစ္စည်းများကို ပလပ်စတစ်အိတ်တွင်ထည့်၍ လက်မှဆွဲထားသည်။ ထို့ပြင် သူ၏ကြောပိုး အိတ် ထဲမှ ကလေးလေး၏ လက် တွင် ပလပ်စတစ် ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အလွတ်ကလေးကို ထည့်ပေးထားခြင်း ကား ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ထူးလည်း ထူးခြားသည်။ အမေ၏ဉာဏ်အမြော် အမြင်ကို ကျွန်တော်လေးစား မိသည်။ ကလေးနှင့်လိုက်ဖက်သော တာဝန်တစ်ခု ပေးတတ်ခြင်းကပင် အမေ၏ကောင်းမွန်သော ဗဟုသုတ ဖြစ်တော့၏။ ”လူသည် အလုပ်လုပ်ရမည်၊ နိုင်ရာဝန်ထမ်းရမည်” ဟု အသံတိတ်သင်ကြားပေးနေခြင်း ဖြစ်နိုင် သည်။
ကျွန်တော် ကြုံဆုံခဲ့ဖူးသော သင်္ဘောအင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး၏အမေသည် ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဖူးသော ကြောပိုး အိတ် ထဲမှကလေးကို ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အလွတ်တစ်လုံးကို ကိုင်ထားစေသောအမေမျိုးဖြစ်ခဲ့မှာ သေချာသ လောက်ဖြစ်သည် ဟု ကျွန်တော်ထင်မိသည်။ ကျွန်တော်၏ထင်မြင်ယူဆချက် မှန်မမှန်ကိုတော့ သားသမီး များကို အလွန်ကောင်းစားစေလိုသော ကျွန်တော်တို့ အဖေ အမေများ တွေးတောဆင်ချင်စဉ်းစား ကြည့်ကြ စေလိုပါသည်။
ချစ်ခြင်းဆိုသည်မှာကိုယ့်အလိုကျ ကိုယ်ပိုင် ကျေနပ်ခံစားမှုမှ သာလွန်၍ မေတ္တာ ဆိုသည်ကား တဖက်သား ကောင်းစားစေလိုသော သဘောသွား ပို၍ အလေးကဲသည်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ သတိမူ သင့်သည်ဟု ထင်ပါသည်။
Posted by Crystal at 3:43 PM0comments
Posted by Crystal at 4:09 AM0comments
အောက်ပါလင့်လေးက ရေမြေ့သခင်ပေးလာတဲ့ လင့်လေးပါရှင်။
သီချင်းနှင့် ပါဝင်သော သရုပ်ဆောင်များကို သဘောကျလို့ပါ။ ဒီကားလေးကို ကြည့်ဖူးထားတာတော့ တော်တော်လေးကို ကြာနေပါပြီ။
ဒါလေးက နောက်တစ်ကားပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တော်တော်လေးကို ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတာတွေကလည်း ကောင်းကြပါပေတယ်။
ယုံကြည်စွာ ကိုယ်ခင်တွယ်နေမယ် .......................ခွဲမသွားပါနဲ့ ချစ်သူရယ်။
ကျမရဲ့အမျိုးသားက နားဆင်ခံစားပါလို့ ပြောလာလို့ပါရှင်။
ဘဝလမ်းမှာ တစ်ဦးက တစ်ဦးကို လမ်းပြကြယ်လေးတွေ အပြန်အလှန် အဖြစ်နဲ့ပေါ့။
ဇနီးမောင်နှံတိုင်း တစ်ဦးကို တစ်ဦး နားလည်မှုတွေနဲ့ ဖေးမကူညီလက်တွဲသွားနိုင်ကြပါစေနော်။
(တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်တွဲလို့ တစ်သက်မခွာမခွဲ အစဉ် လက်ကို ခိုင်ခိုင်ယှက်မယ် သူနဲ့သာဆိုရင်)
Posted by Crystal at 11:14 PM0comments
I Love Joanne Dunn, Love From Darren Gibbs x
ဘာကို ပြောပြချင်တာလဲဆိုတာ သီချင်းစာသားတွေက ကျမကိုယ်စား ပြောပြနေကြပါလိမ့်မယ်၊
From my boyfriend (from my husband)
Waitin' Mr Postman
( Why don't you check it and see one more time for me you gotta )
Mr Postman look and see ( C'mon deliver the letter, the sooner, the better )
အော် အခုတလော ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်၊ ဖောက်ပြန်တယ်လို့သာ ပြောရတာပါ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေက သဘာဝတွေကို ဖျက်ဆီး၊ သဘာဝတရားတွေက ပြန်လည် တုံ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ အခုလိုများ ဆောင်းရာသီမှာ မိုးတွေက ရွာလိုရွာ။ ဆောင်းနှင်းပွင့်တွေ မကျလာပဲ မိုးစက်တွေသာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းကျလာပါတော့တယ်။ စနေနေ့မှာ ရွာတဲ့မိုးဆိုရင် မစဲဘူးလို့ တဆင့်စကား တဆင့်နားကြားဖူးခဲ့တာရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲတော့မသိပါဘူးလေ၊ မိုးတွင်းမှာ စနေနေ့မှာ ရွာတဲ့မိုးဆိုရင် လွယ်ကူစွာ မတိတ်နိုင်တော့ဘူး၊ သတိထားမိတာလေးပါ။ အဲဒါနဲ့ ဆိုင်လားတော့ မသိပါဘူး၊ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် တင်ဆက်ထားပါတယ်၊ နားသောတဆင်ပေးကြပါအုံးနော်။
ဟိုးတလောလေးဆီတုန်းကပေါ့။ ကျမ အထူးနှစ်သက်ပါသော ကွယ်လွန်သူ အဆိုတော် ထူးအိမ်သင်သီဆိုသော “ဇာတ်ပေါင်းခန်း”သီချင်းလေးကို
ကျမရဲ့ အိမ်ဦးနတ်က နားဆင်စေလိုကာ ပေးတုန်းက ကျမ ဘယ်သီချင်းလေးများ ပြန်ပေးရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားမိတော့............
စိတ်ထဲမယ် ပေါ်လာတဲ့ သီချင်းလေးကို မှတ်မှတ်ယယဖြစ်စေလိုတာကြောင့်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ချိုပြုံးသီချင်းနဲ့ ရုပ်ရှင်တချို့ကိုလည်း နှစ်သက်မိတော့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သီချင်လေးနဲ့ အလုပ်က ပြန်လာမယ့် ခင်ပွန်းသည်ကို အမောတော်ပြေစေရန် နားသောတဆင်စေဖို့....။
(မောင့်မူပိုင်ရှင် မောင့်မူပိုင်ရှင် မေတ္တာအသည်းဆက် သက်နှင်းပေးအပ်ချင် ပျက်မယွင်းတဲ့ ဘဝ တစ်ခွင် မောင့်မူပိုင်ရှင် ချစ်ကမ္ဘာမှာပင် မေတ္တာသာလျှင် ချစ်မြတ်နိုး ဆတစ်ပိုးတိုးလို့ ပင် နှောင်ဖွဲ့သမုဒယ ငင် သစ္စာပန်ဆင် ချစ်သူနှစ်ဦး ကြည်နူးပြုံးပြုံး ရွှင် ..........ရည်စူးဆုံးဘဝတိုင်ပဲရှင်........... မောင့်မူပိုင်ရှင် မေ့ဘဝ ပိုင်သူသခင် မေ့ကမ္ဘာလည်းမောင့်အတွက်ထင် အသည်း အသက်လို ပမာတင် မောင့်အကြိုက်သဘော လိုက် လျောမတဲ့ရှင် မောင့်မူပိုင်ရှင် မောင့်မူပိုင်ရှင် .......) (ချိုပြုံး)
albums: Imagine, Shaved Fish, Live In New York City, Imagine (Original Soundtrack), Anthology - Ascot (CD1)
ဒီသီချင်းလေးကို တီးလုံးသံလေးတွေ ကြိုက်တတ်တဲ့ ကျမ အဖေက နားထောင်တတ်တာကြောင့် ကျမလည်း နားထဲစွဲကာ ကြိုက်ခဲ့မိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တခါတခါ ကျမ အမေလည်း ဒီသီချင်းလေးကိုပဲ ဆိုနေသံကြား ရတတ်ပါတယ်။ အခုလိုအချိန်အခါမယ် ကျမလည်း သီချင်းလေးကို ညဉ်းတတ်နေပါပြီ။ ပါးစပ်ထဲ ရောက်လာ တဲ့ သီချင်းကို ယူကျူ့တော်တော် ရှာလိုက်ရပါတယ်။
ကျမနှစ်သက်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကို နားဆင်ခံစားပေးကြပါအုံးနော်။
ဒါလေးလည်း အမှတ်တယအနေနဲ့ ရာသီဘွဲ့သီချင်းလေး။ ထုံးစံအတိုင်း ပေါ့။
ဆယ့်နှစ်ရာသီ နွေ မိုး ဆောင်း ပြောင်းသလို အချစ်တွေဟာ ဘယ်ခါမှ မပြောင်းဘူးလေ...။
ကျမရဲ့ မောင်တော်ဖုရား သူကြိုက်တယ်လို့ ပြောတဲ့သီချင်းတွေထဲမှာ ဒီသီချင်းလဲပါသေးတယ်။ ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ မိန်းမကို ညာညာခိုင်းနေတာပါ။
မနှစ်တုန်းက အွန်လိုင်းမှာ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့တုန်း မိန်းမအတွက် နားထောင်ဖို့ သူကြိုက်တဲ့သီချင်း။
ကျမက အဆိုတော်ထူးအိမ်သင်ရဲ့ သီချင်းတွေကို မကြိုက်သလောက်နဲပါတယ်။ ဒါလေးကိုပါ အမှတ်တယ်အနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျမလည်း အားကျမခံ သီချင်းတွေရှာတာပေါ့။ အဲဒီမှာ မို့မို့သီဆိုထားတဲ့ “ထာဝရ”ကို သွားသတိရပါတယ်။ သူ့ကို ရှာခိုင်းပြီးတော့ အမ်ပီ3တောင် ပြောင်းခိုင်းလိုက်ပါသေးတယ်။ ကဲ မကောင်းဘူးလားနော်။
If God allowed us to go through our life without any obstacles, it would cripple us. We would not be as strong as we could have been. Never been able to fly .